5 ဥရောပမှာတော့တိုက်ရိုက်ဂီတနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဘား | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဥရောပမှာတော့တိုက်ရိုက်ဂီတနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဘား
ရထားခရီးသွားခြင်း, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလူဇင်ဘတ်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ
တိုက်ရိုက်လွှဂီတနှင့်အတူဘားဥရောပမှာနေရာတိုင်းပေါ်လာ, အချိုရည်များနှင့်သီချင်းများအခမဲ့စီးဆင်းရာသွက်အရပ်ဌာန၌အချိန်ကိုသတ်မယ့်လမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့. မင်းကမင်းကိုမြို့ထဲမှာပျော်စရာတစ်ခုရှာနေမယ်ဆိုရင် ရထားခရီးစဉ်, ငါတို့သည်အချို့သောအကြံပြုချက်များရရှိပါသည်. ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းရှိပါတယ်5အားလုံးဥရောပကျော်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတနှင့်အတူဘား:
ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရန်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့သဖြင့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် ကမ်ဘာပျေါတှငျစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ဦးကရထား Save.
1. အဆိုပါမှတ်တမ်းဆိုင်မှာတိုက်ရိုက်ဂီတ, ပဲရစ်, ပြင်သစ်
အဆိုပါမှတ်တမ်းဆိုင် ပြင်သစ်တွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဘားတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဒါဟာရုံ Bastille မက်ထရိုဘူတာရုံအပြင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်. မသာက ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်ပျူငှါနွေးထွေးသောဖြစ်ပါတယ်. ဘားရှေ့၌တည်ရှိ၏, နှင့်နောက်ကျော၏တကယ့်ဖျော်ဖြေပွဲဇာတ်စင်ရှိပါတယ် ဂီတကွင်း, with the audience space hidden behind it.
ဒေသခံတွေအကြံပြု ကြိုတင်မှာယူမှုလာပြီ အကယ်၍ ဒီသီချင်းကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ခရီးသွားစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း. entry ကိုအခမဲ့သောကွောငျ့, ကဘားမှာထိုင်ခုံရဖို့ရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်. သင်၌ရှိကြပြီးတာနဲ့, သငျသညျဂီတ၏အားလုံးအမျိုးအစားများကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်, လုံးဝတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ.
2. အရည်မှာတိုက်ရိုက်ဂီတ, လူဇင်ဘတ်စီးတီး, လူဇင်ဘတ်
တိုက်ရိုက်လွှဂီတနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ bar ကိုမကြာသေးမီကဥရောပတွေကတော့၏မြေပုံပေါ်တွင်လူဇင်ဘတ်ထား. အရည်ကဖေး လူဇင်ဘတ်၏သာယာလှပ Grund ဧရိယာ၌တည်ရှိသည်. သငျသညျနှစ်ဦးစလုံးကော့တေးသောက်ရှိပါကနှင့် ယာဉ်ဘီယာချစ်သူများ သင့်ရဲ့ခရီးသွားပါတီထဲမှာ, ဒီကိုသွားရာအရပ်ဖြစ်ပါသည်.
သင်တစ်ဦးသည်အလွန်ခံစားနေရင်တောင် လူဇင်ဘတ်အတွက်ရေတိုနေထိုင်, သငျသညျဖွယ်ရှိအင်္ဂါနေ့နှင့်ကြာသပတေးနေ့အရည်အတွက်တိုက်ရိုက်ဂီတရှိုးပွဲကိုဖမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်. သင်တစ်ဦးကြားရက်ညများစစ်သည်တော်ဆိုရင်, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အရာအရပ်ကိုဖြစ်ပါသည်.
3. The Wall, ရောမမြို့, အီတလီ
သင်သည်သင်၏ဥရောပအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းညစဉ်ညတိုင်းသွားရောက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတနှင့်အတူသစ်တစ်ခုဒေသခံ bar ကိုရှာတွေ့စိတ်ကူးနိုင်သလား? ဝင်ရောက် The Wall, ရောမမြို့ရဲ့အများဆုံးဒဏ္ဍာရီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတအရက်ဆိုင်ထဲကတစ်ခု, ညစဉ်ညတိုင်းအရင်ဖျော်ဖြေနှင့်အတူ.
ဘားရဲ့ သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခု ညာစန်း Lorenzo ကျောင်းသားဧရိယာ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာသင်သည်များစွာသောတွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတယ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒေသခံတွေ. ယေဘုယျအား, တစ်ဦးစစ်မှန်ရောမအတွေ့အကြုံ, le Mura တစ်ဦးမဖြစ်မနေ-အလည်အပတ်ခရီး - ထိုရက်သတ္တပတ်၏မည်သည့်ညဥ့်အပေါ်.
4. အဆိုပါကြက်တူရွေး, လန်ဒန်, ဗြိတိသျှ
ထင်ရှားစွာ, Idris Elba တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတနဲ့စိတ်ကူးဘားသို့ပေါင်းစပ်ဖို့ရာပါဝင်ပစ္စည်းများသိတယ်. မိမိအဇိမ်ခံဘား, အဆိုပါကြက်တူရွေး, Aldwych တည်ရှိသောကာကမ်းလှမ်းနေသည် သီးသန့်အတွေ့အကြုံ.
အိမ်သူအိမ်သားတီးဝိုင်းစိတ်ကူးတင်ဆက်မှုနှင့်အတူစင်မြင့်သတ်မှတ်နေစဉ်, သငျသညျမစ်စတာလက်လွတ်ချင်ကြပါဘူး. Elba ရဲ့ပုံမှန် DJ သမားအစုံ. ဒါကညာဘက်င် - ထိုဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်မကြာခဏ DJ သမားအစုံဖျော်ဖြေခြင်းအားဖြင့်ပျော်စရာအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ, ဘားနာယက '' ခံစားဖို့. တောက်တောက်အရောင်ကော့တေးကဒီအပူပိုင်းငှက်-ရေးရာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတ bar မှာနောက်ထပ်ခံစားချက်အလှဆင်ရန်.
5. အဆိုပါ Waterhole, အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်
နှစ်သက်ရာမှ ခရီးသွားဧည့် နှင့်ဤတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတ bar ကိုခစျြတဲ့သူဒေသခံများ, အဆိုပါ Waterhole ထက်ပိုပြီးအဘို့အလှည့်ပတ်ခဲ့ 25 နှစ်ပေါင်း. အခါတိုင်းသငျသညျ အမ်စတာဒမ်သို့သွားရောက်, သင်ပူဇော်ဖို့တစ်ခုခုရှိသည်လိမ့်မယ်, ပင်တစ်နေ့တာအတွင်း. တစ်နေသာနေ့ရက်တွင်, ဘားရဲ့ကျယ်ဝန်သောကျန်ကြွင်းအပေါ်လျှော့ပေါ့ခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့ဘာမှမရှိဘူးင်.
လက်လှမ်း၏လွယ်ကူခြင်းဦးစားပေးသင့်ရဲ့စာရင်းထဲမှာမြင့်မားသည်ဆိုပါက, အဆိုပါ Waterhole အမ်စတာဒမ်အတွက်တိုက်ရိုက်ဂီတနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဘားများအတွက်ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုယူ. သောကြောင့်ယင်း၏ဗဟိုတည်နေရာ, ဒါကြောင့်မကြာခဏလူစည်ကားဖြစ်ပါသည်. လူအစုအဝေးတစ်ခုကိုကိုချစ်ဘာဖြစ်လို့နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ပျော်ရွှင်နာရီဖြစ်ပါသည်, သည်အထိကြာရာ9ညနေ!
အဆိုပါမဆိုမှတစ်ဦးအလည်အပတ် အကောင်းဆုံးတိုက်ရိုက်ဂီတဘား သင့်ရဲ့ဥရောပရထားခရီးစဉ်ကိုစတင်ရန်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့် အခုဆိုရင်သင့်လက်မှတ်တွေကြိုတင်နေရာယူ!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ဥရောပတိုက်တွင်တိုက်ရိုက်ဂီတနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဘား” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-bars-live-music-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ru ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#drinkbeer #ကဗျာ #liveshow #musicbar europetravel တွေကတော့ travelamsterdam travelfrance travelparis
3 ဘူဒါပက်ခြင်းအားဖြင့်ရထား မှစ. အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ဥရောပခရီးသွား